Gudoomiyaha G/Sh/Dhexe oo kormeeray barakacayaal – Radio Muqdisho
Gudoomiyaha gobolka Sh/dhexe ayaa booqday tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar oo ay ku sugnaayeen qoysas ku barakacay colaad sanadkii hore ka dhacday deegaanadaasi.
Cali Guudlaawe oo ah gudoomiyaha gobolka Sh/dhexe dhawaana ka soo laabtay shirkii Denmark ayaa booqday Tuulooyinka Raqayle iyo Geeda barkaan oo hoos yimaada degmada Jowhar, isagoo si qaas ah u kormeeray qoysas barakacayaal ah oo ku sugan deeganadaasi.
Gudoomiyaha ayaa barakacayaashaasi u qeybiyay mara kaneecooyin, wuxuuna u sheegay in dhawaan la soo gaarsiin doono gurmad deg deg ah, islamarkaana dib loogu celindoono deegaanadoodii.
Qoysaskan ayaa ku barakacay colaad beeleed ka dhacday deegaanadooda horaanta sanadkii hore waxeyna badankood ku suganyihiin xero ku taala garoonka diyaaradaha degmada Jowhar.
Gudoomiye Guudlaawe ayaa guddi u saaray sidii dadkaasi loogu celin lahaa deegaannadoodii, maadaama la xalliyay colaaddi ay ku soo barakaceen dadkaasi.